Maamulka Somaliland oo ogolaaday heshiis uu Imaaraatku saldhig milatari kaga dhisanayo Berbera
Xildhibaanada labada aqal ee maamulka iskiis is magacaabay ee Somaliland ayaa waxa ay maanta ansixiyeen heshiis u ogolaanaya Imaaraatka Carabta inuu saldhig milatari ka dhisto magaalada dekeda leh ee Berbera.
Baarlamaanka maamulka Somaliland ayaa ku kala qaybsamay ansixinta heshiiska balse waxaa badnaa xildhibaanada ogolaaday oo ay tiradoodu gaarayso 144, 2 xildhibaan waa ay diiday, 2 waa ay ka aamustay halka 9 kalena ayba gebi ahaanba kasoo hor jeesteen heshiiska ayaga oo buuq ka dhex sameeyay fadhigii baarlamaanka maamul goboleedka Somaliland ayada oo ay markii dambe ciidamada amaanka si xoog ah dibada ugusoo saareen.
Madaxweynaha maamulka Somaliland Axmed Siilaanyo ayaa sheegay inay heshiiska ku bedelanayaan fursado shaqooyin iyo weliba dhismaha wadada dheer ee isku xirta Wajaale iyo Berbera.
Dhanka kale xisbiga Wadani ayaa kasoo hor jeestay heshiiska isaga oo ku tilmaamay in dhaqaale lagu bixiyay meel marinta heshiiska, gudoomiye Cabdiraxmaan Cirro ayaa sheegay inuu Imaaraatku lacago u adeegsaday in heshiiska la ansixiyo.
Dowladaha Jabuuti iyo Itoobiya ayaa lagusoo waramayaa inaysan la dhacsanayn heshiiska uu maamulka Somaliland la galay Imaaraatka halka aysan dowlada Soomaaliya weli ka hadlin maadaama madaxweyne Farmaajo uusan weli soo magacaabin raisalwasaare.
Sida ku cad dastuurka dalka Soomaaliya, dowlada dhexe oo kaliya ayaa heshiis ka gali karto wixii quseeya qayraadka dalka, dhulka iyo weliba baddaha.
Imaaraatka ayaa mudaba ka shaqaynayay xaalufinta dalka Soomaaliya isaga oo ka faa’idaystay bur burkii dalka soo gaaray kadib ridistii dowladii dhexe ee dalka waxaana Imaaraatka lagu tebayaa taallooyin badan oo laga fujiyay meelo ka mid ah dalka, waxaa sidoo kale lagu tebayaa ugaar badan oo si sharci daro ah loogasoo qab qabtay qaybo ka mid ah dalka Soomaaliya.
Sidoo kale Imaaraatka ayaa waxa uu qayb weyn ka yahay xaalufinta dhirta dalka Soomaaliya ee laga dhdigo dhuxusha waxa uuna kaga dan leeyahay saldhiga Berbera inuu kala wiiqo qaranimada iyo haybada dhuleed ee Jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya.